Erayo Macaan Oo Xaaskaaga Soo Jiidanayo - Cishqi
Weligaa ma isweydiisay inaad u dirto erayo macaan xaaskaaga gaar ahaan kuwo dareenkeeda kicinayo? Rag fara badan ayaa waxay jecelyihiin in la yiraahdo raaxada ka hor erayo macaan sida erayada dareenka leh laakin iyagu ma yiraahdaan xaasaskooda.
Waxa ay jecelyihiin in iyaga uun lagu yiraahdo erayo macaan, taasina ma ahan wax qurux badan. Xaasaska qaar waa kuwo aanan ku qanacsaneyn raaxada nimankooda mana u sheegan karaan, maxaa yeelay waxay diidayaan in ay u fahmaan si kale, laakin taasi waa qalad mana ahan wax fiican.
Ragow ha iloobina: Dumarka gaar ahaan dumarka kacsiga badan weey jecelyihin in la dhaho erayadaan soo socdo.
Erayo macaan xaaskaaga soo jiidanayo
Sida dumarka dareenkooda loo kiciyo ma ahan sida cilmiga beeraha, waa wax fudud, kaliya isticmaal erayo nuucaan ah.
Markaad xaaskaaga ku tiraahdo erayo macaan gaar ahaan eraydaan sito dareenka aan caadiga ahayn, waxaad arki doontaa iyadoo sugi la’ inta aad guriga ka imaaneyso. Waxa ay maantoo dhan ka fikireysaa waxyaabaha cajiibka ah ee aad u sameyn lahayd markaad guriga timaado.
Dumarka Qaar Xiliyadaan Waxaa Ku Yaraado Guriga Kacsi Dartii
Adeegsiga erayo macaan oo soo jiidasho leh
Inaad adeegsato erayo macan ah ma ahan oo kaliya wax qurux badan ee waa bilaawga raaxada macaan ee xaaskaaga. Waxaa jiro xaasas badan oo iyana jecel adeegsiga erayo macaan ah gaar ahaan erayada dareenka leh ee kiciyo dareemaha balse waa ay ka xishoodaan.
Markaad u bilaawdo xaaskaaga u dirista erayo macaan ah, waxaad arki doontaa iyadoo kuu soo direyso erayada aan halkaan ku diyaarinay oo kale: Erayada kiciyo dareenka raga.
Adiga u noqo hogaan fiican oo qeyb ka ah raaxadeeda, hana u noqon sabab in ay kaa qariso dareenkeeda. Maxaa yeelay dumarka qaar waxay ka cabsadaan sheegida dareenkooda iskaba daa in ay ku dhahdo erayada dareenka kiciyo.
Sidoo kale waxaad arkeysaa iyadoo dhoolacadeyneyso misana kugu sugeyso sariirta si aad balan-qaadkaagii ugu dhabeyso. Xusuusnow: Dumarka waa ku waashaan ninka sida hagar la’aanta ah ugu raaxeeyo, balanqaadyadiisana ka dhabeeyo.
Erayada Dumarka ay jecelyihiin ka hor sariirta
1. Shaqadaa iga badatay, sidaas ay tahayna ma joojin karo inaan adiga kaa fikiro.
2. Ma aqaano waxa igu dhacay, maxaa yeelay adigaan kugu waashay.
3. Maba ka dhergo baahashaada si kastaa oo aan ugu dul rafto.
4. Baahalkeyga butaca ah marabo wax kale marka laga reebo inuu ku dhex jiro baahashaada diiran.
5. Waxaa tahay naagta kaliya ee….
6. Kaliya ma joojin karo ka fikirka habeenkii ugu dambeeyay.
7. Waxaad igaarsiisay heer aan kastuumadaada u qaato shaqada, maxaa yeelay waxaad i dareensiisay raaxo aan caadi ahayn.
8. Waxaan kuu hayaa waxyaabo kedis ah caawa 8:00.
9. Waan jeclahay markaad……
10. Maxaad xiraneysaa caawa?
11. Ma sugi karo ilaa aad halkaan ka timaado, si aan derbiga kuugu dhejiyo intaan ku shuminayo.
12. Hadda ayaan kuu baahanahay.
13. Waxaan kuu hayaa caawa waxyaabo kedis ah, waxaan rajeyn inaad jeclaan doonto.
14. Waan jeclahay inaan ku ciyaaro timahaaga iyo……
15. Ma go’aansan karo qeybta jirkaaga ugu macaan, maxaa yeelay gebi ahaanba waxaa macaan jirkaaga.
16. Waxaan rabaa caawa inaad magaceyga iigu yeerto, maxaa yeelay waxaan ku raaxeystaa dhawaqaaga.
17. Waa dooran kartaa caawa qaabka aad u rabto iyo wax kastaa. Adiga iyo dooqaaga.
18. Waxaan ku haminooyaa inaan hadda adiga kula joogo. Ma ogi inta ay qaadan karto sugitaanka inta aan ku arkayo.
19. Waan jeclahay dareenka jirkaag macaan. Waa mid jilicsan oo quman.
20. Waan jeclahay dhexdaada dhuuban iyo dhabnaada soo jiidashada leh.
21. Waan jeclahay cajirahaaga macaan.
22. Waxaan u xiisay dhadhanka alaabtaada.
23. Waxa kaliya ee aan doonayo ayaa ah inaan hadda arko jirkaaga quruxda badan oo qaawan.
24. Waxaa iga yimaado dhidid kaliya Markaan daawado xagaaga dambe.
25. Daqiiqada aan caraftaada dareemo, baahalkeyga wuu iska istaagaa.
26. Waxaan rajeynooyaa inaan hadda dharka oo dhan kaa bixiyo, kadibna aan salsalaxid jirkaaga ku bilaabo.
Dumarka kuma kacsadaan erayadaan macaan oo kaliya ee waxaa jiro meelo kale oo ay ka helaan raaxo waali ah balse waxaan ku soo qaadan doonaa qeybaha kale.
Haddii aad rabto inaad kamid noqoto akhristayaashaasi, fadlan halkaan hoose iska diiwaan geli.